Chemistry Timeline: Chronology nke Isi Ihe
Chemistry usoro iheomume
Ogologo oge nke isi ihe dị na Chemistry
Oge usoro iheomume nke isi ihe omumu ihe omuma:
Democritus (465 BC)
Akpa iji gwa ya na ihe dị n'ụdị ahụ. Ejiri okwu a bu 'nkpuru'.
"site na mgbakọ dị ilu, site na mgbakọ ụtọ, ma na eziokwu n'ezie na efu"
Ndị na-emepụta ihe ndị ọzọ (~ 1000-1650)
Tinyere ihe ndị ọzọ, ndị ọkachamara na-achọ ihe mgbagwoju anya, gbalịrị igbanwe ndu na ọla ndị ọzọ n'ime ọlaedo, ma gbalịa ịchọpụta elixir nke ga-eme ka ndụ dị ogologo.
Ndị ọkachamara ahụ mụtara otú e si eji ogige ndị dị mma na ihe ndị sitere na osisi na-agwọ ọrịa.
Nkọwa ederede kachasị dị mkpa nke afọ abụrụ dị ka compass.
Boyle, Sir Robert (1637-1691)
Iwu iwu gas. Mbụ iji gwa ha ihe jikọrọ ya na obere ahụ iji mepụta mkpụrụ ndụ. Dị iche n'etiti ogige na mixtures.
Torricelli, Evangelista (1643)
Chọtara barometer Mercury.
von Guericke, Otto (1645)
Emere mpempe mmiri mbụ.
Bradley, James (1728)
Na-eji aberration nke starlight iji chọpụta ọsọ nke ìhè n'ime 5%. ziri ezi.
Chọta oxygen, carbon monoxide, na oxide nitrous . E nyere iwu eletrik na-edegharị elekere (1767).
Scheele, CW (1742-1786)
Achọpụtara chlorine, acid tartaric, oxidation ígwè, na uche nke ogige ọlaọcha ka ìhè (photochemistry).
Le Blanc, Nicholas (1742-1806)
Usoro a na-achọpụta maka ịme ash si sodium sulfate, limestone, na coal.
Lavoisier, AL (1743-1794)
Chọta nitrogen. A kọwapụtara ihe mejupụtara ọtụtụ ogige ndị dị ndụ. Mgbe ụfọdụ, a na-ewere ya dị ka Nna nke Chemistry .
Volta, A. (1745-1827)
Chọta batrị eletrik.
Berthollet, CL (1748-1822)
Ezizi nke nchịkwa nke akụrụngwa. Achọpụtara ike ịkụ chlorine.
Nyochaa ijikọta ọnụ ọgụgụ nke atoms (stoichiometry).
Mmepe nke ọgwụ mgbochi kịtịkpa (1776).
Franklin, Benjamin (1752)
Na-egosi na ọkụrị bụ ọkụ eletrik.
Ntọala akụrụngwa na- adabere na ndị nwere ncheta (1807). Iwu doro anya nke nrụgide dị iche iche nke egbe.
Avodrodro, Amedeo (1776-1856)
Ihe a na-atụ aro bụ na ụdị égbè ndị dị nhata nwere ọnụ ọgụgụ ahụ nke mkpụrụ ndụ.
Davy, Sir Humphry (1778-1829)
Ntọala doro anya nke electrochemistry. Ịmụ electrolysis nke salts na mmiri. Ọkpụkpụ sodium na potassium.
Gay-Lussac, JL (1778-1850)
Chọta boron na ayodiin. Chọtara ihe omimi (litmus). Ụzọ kacha mma maka ịme sulphuric acid . Ụdị nchọpụta nke nyocha.
Berzelius JJ (1779-1850)
Mkpụrụ mmanụ dị iche iche dịka ha si eme ihe. Achọpụtara ma dịpụrụ adịpụ ọtụtụ ihe (Se, Th, Si, Ti, Zr). Ejiri okwu a bu 'isomer' na 'ihe ngbaghari'.
Coulomb, Charles (1795)
Ewebatara iwu nke ikuku nke electrostatics.
Okwu a na-akpọ 'electrolysis'. Ekepụtara echiche nke ọkụ eletriki na ike ikuku, ikuku, batrị na electrometallurgy. Faraday abụghị onye nkwado nke atomism.
Cheta na ikpo oku bu ike.
Wohler, F. (1800-1882)
Ntuzo mbu nke organic organic (urea, 1828).
Achọpụtala ngwangwa nke rubber (1844). Hancock na England mere nchọpụta yiri nke ahụ.
Na-eto eto, Thomas (1801)
Na-egosipụta ọdịdị nke ìhè na ụkpụrụ nke nnyonye anya.
Liebig, J. von (1803-1873)
Achọpụta photosynthesis na-eme nchọpụta na onodu ala. Nke mbụ nyere iwu maka iji nri. Chọta chloroform na cyanogen ogige.
Oersted, Hans (1820)
Echetara na ihe dị ugbu a na waya nwere ike ịgbanye ọkụ kọmpụ - nyere ihe mbụ gosiri na njikọ dị n'etiti ọkụ eletrik na magnetism.
Graham, Thomas (1822-1869)
Na-amụ nyocha nke ngwọta site na akpụkpọ anụ. Guzobe ntọala nke colloid kemist.
Nnyocha mbụ nke nje dịka ndị na-akpata ọrịa.
Zụlite ubi nke immunochemistry. Ewebata okpomọkụ-sterilization nke mmanya na mmiri ara ehi (pasteurization). Ndị na-enyocha mmiri (enantiomers) dị na tartaric acid.
Sturgeon, William (1823)
Carnot, Sadi (1824)
Ngwá ọrụ ọkụ ọkụ.
Ohm, Simon (1826)
Iwu doro anya nke nkwụsi ike eletrik .
Brown, Robert (1827)
Achọpụtala ụla Brownian.
Malite na iji antiseptics na ịwa ahụ, dịka, phenols, carbolic acid, ndị mọnk.
Kekulé, A. (1829-1896)
Nna nke kemistric aromatic. Emeputara carbon carbon na-anọ na nhazi nke mgbanaka benzene. Mgbanwe ndị isomeric atụ (ortho-, meta-, para-).
Achọpụtala dynamite, ntụpọ na-enweghị ntụpọ, na ahịhịa ala. Ebube kwadoro mba nile maka mmezu nke onwu , physics, na ọgwụ (Nrite Nobel).
Achọpụtara oge nke ihe ndị ahụ. Na-ejikọta ihe ndị mbụ ha mere n'ime asaa (1869).
Achọpụtara plastic Celluloid (nitrocellulose gbanwere iji camphor) (1869).
Perkin, Sir WH (1838-1907)
Ngwunye mmiri nke mbụ (mauveine, 1856) na ihe mbụ na-esi ísì ụtọ (coumarin).
Beilstein, FK (1838-1906)
Ejikọtara Handbuchder organichen Chemie, compendium nke ihe onwunwe na mmeghachi omume nke organics.
Gibbs, Josiah W. (1839-1903)
Kọwaa isi iwu atọ nke thermodynamics. Kọwara ọdịdị nke entropy ma mee ka mmekọrịta dị n'etiti chemical, eletriki, na ike ọkụ.
Chardonnet, H. (1839-1924)
Na-emepụta eriri sịntetik (nitrocellulose).
Joule, James (1843)
Ule a gosipụtara na okpomọkụ bụ ụdị ike .
Boltzmann, L. (1844-1906)
Zụlitere nkà ihe omimi nke mkpụrụ osisi. A na-achikota ikike ịzọrọ oke na ọdịiche dị na Iwu Boltzmann.
Roentgen, WK (1845-1923)
Achọpụtara x-radies (1895). Nrite Nobel na 1901.
Onyenwe anyị Kelvin (1838)
Kọwapụtara ebe kachasị elu nke okpomọkụ.
Joule, James (1849)
Nsonaazụ sitere na nnwale na-egosi na okpomọkụ bụ ụdị ike.
Le Chatelier, HL (1850-1936)
Nnyocha ihe omimi banyere mmeghachi ihe nha ( Le Chatelier's Law), njigide nke ígwè, na ígwè na ígwè metallurgy.
Becquerel, H. (1851-1908)
Achọpụtara redioactivity nke uranium (1896) na mmeri nke electrons site na magnetik na gamma ụzarị. Nrite Nobel na 1903 (na Curies).
Moisson, H. (1852-1907)
Zụlite ọkụ eletrik maka ịme carbides na ọla ọcha. Ọkpụkpụ dị iche iche dịpụrụ adịpụ (1886). Nrite Nobel na 1906.
Na-amụ sugars, purines, amonia, uric acid, enzymes, nitric acid . Nchọpụta ọsụ ụzọ na sterochemistry. Nrite Nobel na 1902.
Thomson, Sir JJ (1856-1940)
Nnyocha banyere ọkụ ọkụ cathode gosiri na e nwere electrons (1896). Nrite Nobel na 1906.
Plucker, J. (1859)
Wuru otu n'ime ikuku gas na-ekpo ọkụ (kpụkọrọ ihe cathode ray).
Maxwell, James Clerk (1859)
Edere mgbakọ na mgbakọ na mwepụ nke mkpụrụ ndụ nke gas.
Ọnụ ọgụgụ nyocha nke mmeghachi omume na ọnọdụ okpomọkụ (njiri Arrhenius) na nkwarụ electrolytic. Nrite Nobel na 1903 .
Ụlọ, Charles Martin (1863-1914)
Ụzọ mbata nke ịmepụta aluminum site na mwepụta nke alumina.
Nchọpụta yiri nke ahụ site Heroult na France.
Baekeland, Leo H. (1863-1944)
Achọpụtara phenolformaldehyde plastic (1907). Bakelite bụ nke mbụ resin synthetic resin.
Nrite Nobel na 1920 maka ọrụ na thermochemistry. Na-eme nchọpụta bụ isi na electrochemistry na thermodynamics.
Werner, A. (1866-1919)
Echiche doro anya nke njikọ ọnụ ọgụgụ nke valence (mgbagwoju onwu). Nrite Nobel na 1913.
Mụ na Pierre Curie , achọpụtara na okpukpu ala na polonium (1898). Ịmụ banyere redioactivity nke uranium. Nrite Nobel na 1903 (na Becquerel) na nkà mmụta ọgwụ; na onwu onwu 1911.
Haber, F. (1868-1924)
Akwukwo amonia sitere na nitrogen na hydrogen, nke mbido mmeputa ulo oru nke nitrogen (usoro Bosch na-emeputawanye). Nrite Nobel 1918.
Onyenwe anyị Kelvin (1874)
Kọwaa iwu nke abụọ nke thermodynamics.
Rutherford, Sir Ernest (1871-1937)
Achọpụtara na uranium radieshon bụ nke ebubo ebubo 'alpha' ma jiri ebubo ebubo 'beta' (1989/1899). Nke mbụ iji gosipụta ire ere rediokụ nke ihe dị arọ ma mee mgbanwe mmegharị (1919). Chọtara ọkara ndụ nke ihe redioactive . Guzosie ike na oghere ahụ dị ntakịrị, dị oke, na ebubo ya. Echere na electrons nọ n'èzí. Nrite Nobel na 1908.
Maxwell, James Clerk (1873)
Echere na ogige eletrik na magnet jupụtara ohere.
Stoney, GJ (1874)
Echere na ọkụ eletrik nwere mkpụrụ akụkụ ọjọọ ndị ọ kpọrọ 'electrons'.
Lewis, Gilbert N. (1875-1946)
Achọpụtara eletrọniki eletrọniki nke acids na ntọala.
Nnyocha nke ndị ọsụ ụzọ na nhazi nke isotope site na spectrograph mass. Nrite Nobel 1922.
Achọpụta na ọkụ ọkụ cathode na-agagharị na ogologo usoro, na-enye ụgwọ na-ezighị ezi, na-ele ya anya site na eletriki na magnet (na-egosi ụgwọ na-ezighị ezi), na-eme ka iko nwee mmụba, ma mee ka ọkpụkpụ na-aga n'okporo ụzọ ha.
Nnyocha na porphyrins, chlorophyll, carotene. Mkpụrụ obi na-esiri ike. Nrite Nobel na 1930.
Nnyocha na mpaghara nke onwu ihe omimi, ihe omimi ihe omimi, ihe omumu onwu, onodu eletriki n'igwe, igwe ojii. Nrite Nobel na 1932.
Na-amụ ihe dị elu nke polymer, njikọ catalytic, usoro polymerization. Nrite Nobel na 1963.
Flemming, Sir Alexander (1881-1955)
Achọpụtara mkpụrụ ndụ penicillin (1928). Nrite Nobel na 1945.
Goldstein, E. (1886)
Oji ihe omumu nke a na-eji ihe omumu akpu '' onu ahia ', nke nwere eletriki na magnetik ihe di iche iche na-acho ihe ndia.
Hertz, Heinrich (1887)
Achọpụtara mmetụta nke fotoelectric.
Mosesley, Henry GJ (1887-1915)
Chọtara mmekọrita n'etiti ugboro nke ụzarị ụzarị ray nke ebumpụtagha na nọmba atomiki (1914). Ọrụ ya dugara n'usoro nhazi nke okpokoro oge na- adabere na nọmba atomomic karịa nchịkọta nukom .
Hertz, Heinrich (1888)
Achọpụtara ụda redio.
Nyocha oru banyere nyocha na usoro nke nyocha nhazi.
Midgley, Thomas (1889-1944)
Achọpụtala tetraethyl na-eduzi ya na ọ bụ dị ka ọgwụ mgbochi maka mmanụ ụgbọala (1921). Achọpụtara ndị fluorocarbon refrigerants. Na-eme nchọpụta n'oge na synthetic roba.
Ipatieff, Vladimir N. (1890? -1952)
Research na mmepe nke catalytic alkylation na isomerisation nke hydrocarbons (ya na Herman Pines).
N'ikwu okwu, Sir Frederick (1891-1941)
Ngwurugwu insulin na-abaghị uru. Nrite Nobel na 1923.
Achọpụtara ndị na-anọchi anya (1932). Nrite Nobel na 1935.
Urey, Harold C. (1894-1981)
Otu n'ime ndị isi nke Manhattan Project. Achọpụtara deuterium. Nrite Nobel 1934.
Roentgen, Wilhelm (1895)
Achọpụtara na ụfọdụ ọgwụ dị nso na cathode ray tube glowed. Enwetara ụzarị ọkụ nke na-enweghị atụ site na mpaghara magnet, nke ọ kpọrọ 'ụzarị ụzarị'.
Becquerel, Henri (1896)
Mgbe ọ na-amụpụta mmetụta nke ụzarị ray na ihe nkiri foto, ọ chọpụtara na ụfọdụ kemịkal na-agbapụta ma na-ebunye ụzarị ọkụ.
Carothers, Wallace (1896-1937)
Neoprene (polychloroprene) na nylon (polyamide).
Thomson, Joseph J. (1897)
Achọpụtara eletrik ahụ. Jiri kpara cathode ray iji chọpụta ihe a na-akwụ ụgwọ na oke eletrik. Chọtara na 'afụ ụzụ' nwere njikọ na proton H +.
Plank, Max (1900)
Kọwaa radiation law na Planck mgbe nile.
Echere nhichapu nke ihe rediogha n'ime '' isotopes 'ma ọ bụ ihe ọhụrụ , kọwapụtara' ọkara ndụ ', mere nyocha nke ume nke ire ere.
Kistiakowsky, George B. (1900-1982)
Kwalite ihe eji eme ihe na ngwa bombu mbụ .
Heisenberg, Werner K. (1901-1976)
Zụlitere nkwalite njikọta nke njikọta ahụ. Mkpụrụ ndị a kọwapụtara na- eji usoro nke metụtara frequencies nke akara elekere. Kọwaa Ụkpụrụ Ejighị Ntụkwasị (1927). Nrite Nobel na 1932.
Mbụ iji nweta mmezigharị nuklia na-achịkwa (1939/1942). Na-eme nnyocha dị omimi banyere ihe ndị dị n'okpuru subatomic. Nrite Nobel na 1938.
Dee ihe atụ 'Saturnian' atatị na akwa mgbaaka nke electrons na-agbanwegharị banyere ihe akuku ebubo.
Chọtara na osisi ndị ahụ na-abaghị uru nwere nhazi eletrọn na-arụ ọrụ nke na-emepụta arụmọrụ ha.
Geiger, Hans (1906)
Zụlitere ngwaọrụ eletriki nke mere ka 'pịa' nụ 'mgbe ị gụrụ mkpụrụ akụkụ mkpụrụ.
Lawrence, Ernest O. (1901-1958)
Achọpụtara cyclotron, nke e ji meepụta ihe ndị mbụ synthetic. Nrite Nobel na 1939.
Libby, Wilard F. (1908-1980)
Zụlitere usoro ịgba chaa chara 14. Nrite Nobel na 1960.
Ernest Rutherford na Thomas Royds (1909)
Na-egosi na mkpụrụ akụkụ ahụ bụ akara ọnụọgụ abụọ okpukpu abụọ .
Bohr, Niels (1913)
Ụdị ihe atụ nke aturu nke aturu nwere etu ogugu nke electrons.
Milliken, Robert (1913)
Ahụmahụ kpebiri ụgwọ na uka nke ihe eletrik na-eji mmanu mmanụ.
Crick, FHC (1916-) na Watson, James D.
Kpọrọ ihe dị iche iche nke DNA molecule (1953).
Woodward, Robert W. (1917-1979)
Gwakọta ọtụtụ ogige , gụnyere cholesterol, quinine, chlorophyll, na cobalamin. Nrite Nobel na 1965.
Jiri ihe odide dị iche iche na-egosi ịdị adị nke isotopes.
de Broglie (1923)
Ekeputara ihe abụọ nke electrons.
Heisenberg, Werner (1927)
Kọwaa ihe a na-ejighị n'aka. Mkpụrụ ndị a kọwara dị iche iche na-eji usoro dabere na ugboro ugboro nke akara elekere.
Cockcroft / Walton (1929)
Haziri mpempe akwụkwọ ntinye na bombarded lithium na protons iji mepụta mkpụrụ akụkụ ahụ.
Ndị electrons dị ka igwe ojii na-aga n'ihu. Ejiri 'ndị na-ebugharị' iji kọwaa mgbatị na mgbakọ na mwepụ.
Dirac, Paul (1930)
Na-achọ mgbochi ma chọpụta mgbochi electron (positron) na 1932. (Segre / Chamberlain achọpụtara mgbochi na 1955).
Chadwick, James (1932)
Achọpụtara onye na-anọchi anya.
Anderson, Carl (1932)
Pauli, Wolfgang (1933)
Ekwadoro ịdị adị nke neutrinos dịka ụzọ nyocha maka ihe yiri ka ọ bụ imebi iwu nke nchekwa nke ike na ụfọdụ mmeghachi omume nuklia.
Fermi, Enrico (1934)
Oziri echiche nke ozizi beta .
Ekwenyere na ihe dị arọ na-ewepụta neutrons iji mepụta ngwaahịa ndị na-adịghị agbanwe agbanwe na usoro nke na-etinye aka na neutrons, si otú a nọgide na-emeghachi omume olu. ihe ndị ahụ dị arọ weghaara neutrons iji mepụta ngwaahịa ndị na-adịghị agbanwe agbanwe na usoro nke na-etinye aka na neutrons, si otú a nọgide na-emeghachi omume olu.
Seaborg, Glenn (1941-1951)
Gwakọta ọtụtụ ihe ndị dị na transuranium ma nye aro ka a gbanwee nhazi nke okpokoro oge.
Nlereanya ule nke Gas Gas
Na-agbanwegharị Ounces Mmiri Nye Mịka Mmiri
Usoro nkọwa na ihe atụ
Ntughari Ntube Ntuzi Beta Ihe Nlereanya
Na-agbanwegharị Cubic inches to Liters
Ihe Nlereanya Ngwá Agha Ihe Nlereanya
Ihe mere oji ji acha ọcha
Kedu ihe mere akpịrị ji agba agba
Ot'u esi eme ka Celsius di iche iche (Celsius C ruo ° F)
Njigide nke mmeghachi omume ihe nlereanya
Ngosipụta Ngosipụta White Face
Mepụta Microsoft Access 2007 Database Iji Template
Otu esi dee edemede Igodo nke kachasị elu maka edemede nke ederede
Ugbo ala Ị Pụrụ Ị Pụghị Iche 4 Nwunye Ala
Bionic Golf Gloves Na-amụba N'adịghị Atụmatụ Banyere Ndị Na-enye Ọrịa Ogbu na nkwonkwo
Feng Shui agwọ
Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị Banyere Ịga n'ihu na Mmụta Ndị Ntorobịa
Maka Ndị Nkụzi Na-eto Eto
3 na 4 Digit Worksheets Na Remainders
Otu esi eji akwukwo di nma
Na-ezute otu anụ ọhịa nke Astronomy: Tycho Brahe
Ihe ndị mere eme na French History
Ego Ole Ka Kwesịrị Ịtụ Egwuregwu Gị?
10 Bugs Red na Black Ị Pụrụ Ịchọta n'Ubi Gị
Ịkpa Oké Osimiri
Kedu ụdị ngwakọ abụọ?
Kedu Ihe Na-achọ?
Iji TDBGrid Component
Ndị ahịa Slave Africa: A History
Gaa na ya na Pa'lante
Mkpụrụ obi, Mkpụrụ osisi a na-amị mkpụrụ
Nso Azu! Nkpofu na mkpochapu
Otu esi eme njem na "Jerry Springer Show"
Olee otú e si chọpụta ihe ndị a chọpụtara?
Jedi Nna-ukwu: Gịnị bụ ihe dị mkpa maka ndị na-eto eto
Asụsụ nke Spain abụghị ndị na-asụ Spanish
Eziokwu Banyere Tyrannosaurus Rex, Eze nke Dinosaurs